Medical Writings for Over 18: Date Rape Drugs သတိလစ်စေရန် ပြုလုပ်နိုင်သည့်ဆေးဝါးများ
Date Rape Drugs သတိလစ်စေရန် ပြုလုပ်နိုင်သည့်ဆေးဝါးများ
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၁ဝ၄)Date rape သတိလစ်စေရန် ပြုလုပ်နိုင်သည့်ဆေးဝါးများကို မိန်းကလေးများ အထူးသတိပြုသင့်
အခုပြောချင်တဲ့ဆေးတွေကတော့ မြန်မာအခေါ်အဝေါ်နဲ့ ဆိုရင် စိတ်ကို ပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများစာရင်းမှာ ထည့်ရမယ် ထင်ပါတယ်။
Date rape သတိလစ်စေရန် ပြုလုပ်နိုင်သည့်ဆေးဝါးများကို မိန်းကလေးများ အထူးသတိပြုသင့်အခုပြောမယ့်ဆေးတွေကို တစ်ခါတစ်ရံမှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်မှုတွေကို အထောက်အကူပြုဖို့ အသုံးပြုကြပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်တယ်ဆိုရာတွင် ကာယကံရှင်၏ သဘောဆန္ဒ မပါသော လိင်မှုဆိုင်ရာ အပြုအမူတိုင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ ဤနေရာတွင် မလျှော်ရာ ကိုင်တွယ်ခြင်း၊မှအစ (အရွယ်ရောက်သူတိုင်း သိကြပြီးဖြစ်မည့် အမြင်ရိုင်းသော ရှင်းလင်းချက် စာသားများကို ဖျက်ထားပါသည်။ ပုံ မောင်လူအေး) ကြံစည်ခြင်း၊တို့ပါ ပါဝင်ပါသည်။ယခုပြောမည့် ဆေးဝါးများ၏ အာနိသင်ကြောင့် ဆေးခတ်ခံရသူဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခုခံနိုင်မှု မရှိတော့ဘဲ လိင်ဆက်ဆံမှုအား ငြင်းပယ်နိုင်စွမ်း ပျောက်ဆုံးကာ မည်သို့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် ဆိုသည်ကိုပင် မှတ်မိနိုင်စွမ်း မရှိတော့ပေ။ ယင်းဆေးဝါးများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အရောင်မရှိ၊ အနံ့မရှိဘဲ အရသာလည်း မရှိသဖြင့် တစ်ဖက်သား မရိပ်မိစေဘဲ အချိုရည်အတွင်းသို့ ထည့်ခတ်နိုင်ပေသည်။ Date rape drug အမျိုးအစားအနည်းဆုံး သုံးမျိုး ရှိပါသည်။ ယင်းတို့မှာ -1. GHB (Gamma Hydroxybutyric Acid)2. Rohypnol (Flunitrazepam)3. Ketamine (Ketamine Hydrochloride) တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။Date rape (ချိန်းတွေ့ကျင့်ကြံခြင်း၊လို့ ဘာသာပြန်ရင် ရမယ်ထင်ပါ့) ဟုအသုံးများသော်လည်း ပညာရှင်အများစုကတော့ ဆေးဝါး အသုံးပြု၍လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်ခြင်း၊ (drug-facilitated sexual assault) ဟူသော အသုံးအနှုန်းကို ပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။ ယင်းဆေးဝါးများအား ဓါးပြမှုနှင့် ရုပ်ပိုင်းအရ တိုက်ခိုက်ခြင်း၊များကဲ့သို့သော အခြား ရာဇဝတ်မှု များတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး ကျားမ မရွေး ဆေးအာနိသင်ပြနိုင်ပေသည်။ဆေး၏ ပုံသဏ္ဍာန်1. GHB သည် အရောင်အဆင်းနှင့် အနံ့မရှိသော အရည်၊ အဖြူရောင်အမှုန့်နှင့်ဆေးပြားဟူ၍ပုံစံအမျိုးမျိုး ရှိသည်။ 2. Rohypnol သည် ဆေးပြားပုံစံဖြစ်ပြီး အရည်များတွင် ပျော်ဝင်နိုင်သည်။ ဆေးပုံစံအသစ်သည် အရည်များတွင် ပျော်ဝင်သည့်အခါ အပြာရောင် သန်းသွားသော်လည်း အရောင်မရှိသည့် ဆေးပုံစံဟောင်းအားလည်း ရရှိနိုင်ပေသေးသည်။3. Ketamine မှာမူ အဖြူရောင်အမှုန့်ဖြစ်သည်။ခန္ဓာကိုယ်အား အကျိုးသက်ရောက်ပုံ• ဆေးသည် လျှင်မြန်စွာ အာနိသင်ပြနိုင်သည်။ ဆေးအာနိသင်မပျယ်ခင်ခံသည့်အချိန်မှာမူ ကွဲပြားသည်။ ယင်းသည် ဆေးမည်မျှ• အသုံးပြုသည်ဆိုသည့်အချက်နှင့် အရက်ကဲ့သို့သော အခြားပစ္စည်းများနှင့်ရောစပ်ထားသည့်အပေါ်တွင် မူတည်သည်။ အရက်သည် ထိုဆေးများ၏ အာနိသင်ကိုပိုမိုဆိုးဝါးစေပြီး ကျန်းမာရေးကို ပိုမိုထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် GHB ကို အိမ်တွင်ပင် အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်ပေသည်။GHB ၏ အာနိသင်များ• အာရုံစူးစိုက်နိုင်မှု လျှော့ကျခြင်း၊• အိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်ခြင်း၊• မူးဝေခြင်း၊• မအီမသာနှင့် ပျို့ချင် အန်ချင်စိတ်ဖြစ်ခြင်း၊• အမြင်ဝေဝါးလာခြင်း၊• သတိလစ်ခြင်း၊• လေဖြတ်သကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်း၊• ဆေးခတ်ခံရချိန်နှင့် ဆေးအာနိသင် ပျယ်ချိန်အကြားမှ အဖြစ်အပျက်များအား မမှတ်မိခြင်း၊• အသက်ရှူရန် ခက်ခဲခြင်း၊• တုန်တုန်ယင်ယင်ဖြစ်ခြင်း၊• ချွေးထွက်ခြင်း၊• အော့အန်ခြင်း၊• နှလုံးခုန်နှုန်း နှေးကွေးခြင်း၊• အိပ်မက်ကဲ့သို့ ခံစားရခြင်း၊• သတိမေ့မြောခြင်း၊ (ဦးနှောက်အလုပ် ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ - coma)• သေဆုံးခြင်း၊
Rohypnol ၏ အာနိသင်များ• ဆေးခတ်ခံရချိန်နှင့် ဆေးအာနိသင် ပျယ်ချိန်အကြားမှ အဖြစ်အပျက်များအား မမှတ်မိခြင်း၊• သွေးပေါင်ချိန်ကျခြင်း၊• အိပ်ချင်လာခြင်း၊• ကြွက်သားများ အားလျှော့လာခြင်း၊ သို့မဟုတ် ကြွက်သားများအား ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း မရှိတော့ခြင်း၊• အရက်မူးသကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်း၊• မအီမသာနှင့် ပျို့ချင် အန်ချင်စိတ်ဖြစ်ခြင်း၊• စကားမပြောနိုင်တော့ခြင်း၊• လှုပ်ရှားရန် ခက်ခဲလာခြင်း၊• အသိစိတ် ပျောက်ဆုံးခြင်း၊• ဇဝေဇဝါဖြစ်ခြင်း၊• အမြင်ဝေဝါးလာခြင်း၊• မူးဝေခြင်း၊• အစာအိမ် မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊Ketamine ၏ အာနိသင်များ• စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်း၊• အချိန်နှင့် အမှတ်အသားများအား မှတ်သားနိုင်စွမ်း ပျောက်ဆုံးခြင်း၊• အမြင်နှင့် အကြားအာရုံများ မမှန်မကန် ဖြစ်လာခြင်း၊• မိမိကိုယ်ကို မထိန်းသိမ်းနိုင်ဟု ခံစားလာရခြင်း၊• လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းအား ထိခိုက်လာခြင်း၊• အသက်ရှူရန် ခက်ခဲလာခြင်း၊• အူတက်အောင်ရယ်ခြင်း၊• အော့အန်ခြင်း၊• ခန္ဓာကိုယ် ထိတွေ့ခံစားနိုင်စွမ်း မရှိတော့ခြင်း၊• မှတ်ဉာဏ်ထိခိုက်ခြင်း၊• အိပ်မက်ကဲ့သို့ ခံစားရခြင်း၊• ထုံထိုင်းခြင်း၊• လှုပ်ရှားမှုအား ဟန်ချက်ညီအောင် ထိန်းနိုင်စွမ်း ပျောက်ဆုံးခြင်း၊• အမူအရာ ကြမ်းတမ်းလာခြင်း၊• စကားသံ ဗလုံးဗထွေးဖြစ်ခြင်း၊ဒီဆေးတွေ တရားဝင်သလား• တစ်ချို့ဆေးတွေက တရားဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ကို မထိခိုက်ဟုမဆိုလိုပါ။ တရားဝင် ဆေးဝါး ဖြစ်သော်လည်း ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ(ဆရာဝန်ကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များ) ၏ ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲ အသုံးမပြုသင့်ပါ။• Rohypnol သည် တရားဝင်ဆေးဝါး မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ဥရောပနှင့်မက္ကစီကိုတို့တွင် အိပ်မပျော်သည့် ရောဂါများအတွက် သောက်ရန် ညွှန်လေ့ရှိပြီး ခွဲစိတ်ရာတွင် မေ့ဆေးအဖြစ်လည်း တရားဝင် အသုံးပြုတတ်ကြသည်။• Ketamine ကို အမေရိကတွင် လူများနှင့် တိရိစ္ဆာန်များအတွက်မေ့ဆေးတစ်မျိုးအဖြစ် တရားဝင်သုံးစွဲကြသည်။ တိရစ္ဆာန်များတွင် အများဆုံး အသုံးပြုကြသည်။ တိရိစ္ဆာန်ဆေးခန်းများရှိ Ketamine ဆေးများအား မကြာခဏ လုယက်ခံကြရကြောင်း သိရသည်။• GHB အား narcolepsy ဟုခေါ်သည့် အိပ်မပျော်သည့်ရောဂါအား ကုသရန်အတွက်အမေရိကတွင် မကြာသေးမီက တရားဝင် ဆေးဝါးအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ဆေးခတ်မခံရအောင် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ• ကိုယ်နှင့်မသိသူများမှ တိုက်ကျွေးသည့် ဖျော်ရည်၊ သောက်ရေစသည့်အရည်များအား မသောက်ပါနှင့်။• အအေးသံဗူးများအား ကိုယ်တိုင်ဖွင့်၍ သောက်ပါ။• ကိုယ်ပိုင် သောက်ရည်နှင့် အအေးဗူးများအား ကိုယ်နှင့်မကွာထား၍အိမ်သာသွားလျှင်ပင် ယူသွားပါ။• အအေးနှင့် ရေအား အခြားသူနှင့် မျှဝေမသောက်ပါနှင့်။ Punchဖျော်ရည်များနှင့် ယင်းကဲ့သို့သော လူအများ စုပေါင်းသောက်သုံးသည့်ခွက်များ၊ ပုလင်းများအတွင်းမှ အရည်များအား မသောက်ပါနှင့်။ (မိန်းကလေးတွေသင်္ကြန်လိုအချိန်မျိုး သတိထားကြဗျို့။ အဲဒီဟာတွေထဲမှာဆေးခတ်ထားနိုင်ပါတယ်။)• ထူးခြားသော အနံ့နှင့် အရသာရှိသော မည်သည့်အရည်ကိုမျှ မသောက်ပါနှင့်။• များသောအားဖြင့် GHB တွင် ငန်သောအရသာ ရှိပါသည်။အကယ်၍ ဆေးခတ်ခံရသည် သို့မဟုတ် မုဒိမ်းကျင့်ခံရသည်ဟုထင်ပါက • ရဲစခန်းသို့မဟုတ် ဆေးရုံသို့ တိုက်ရိုက်သွားပါ။• ဖြစ်နိုင်သမျှ ချက်ခြင်း၊ ဆီးစစ်ဆေးမှု ခံယူပါ။ ဆေးအာနိသင်သည်အလွန်လျှင်မြန်စွာ ပျယ်သွားနိုင်ပါသည်။
• Rohypnol သည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းတွင်နာရီပေါင်းများစွာ နေနိုင်ပြီး ဆေးသောက်သုံးပြီး ၇၂ နာရီအတွင်းတွင် ဆီးအတွင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ GHB မှာမူ ၁၂ နာရီအထိသာ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း နေနိုင်ပါသည်။• တစ်စုံတစ်ရာ အကူအညီမရမချင်း ဆီးမသွားပစ်ပါနှင့်။ ရေလောင်းဆေးခြင်း၊ ရေချိုးခြင်း၊ သို့မဟုတ် အဝတ်အစားလဲခြင်း၊ မပြုလုပ်ပါနှင့်။ ယင်းအရာများသည် မုဒိမ်းကျင့်ခံရသည်ဆိုသည့် သက်သေများ ဖြစ်ပါသည်။• အရေးပေါ်ဖုန်းနံပါတ် သို့မဟုတ် ရဲဌာနသို့ ဖုန်းခေါ်ပါ။ ရှက်ခြင်း၊၊အပြစ်ရှိသလို ခံစားရခြင်း၊၊ ကြောက်လန့်ခြင်း၊နှင့် တုန်လှုပ်ခြင်း တို့သည်ပုံမှန်ဖြစ်တတ်သော အရာများ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွမ်းကျင်သည့် ပညာရှင်များ၏ အကြံဉာဏ် ရရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။• အရက်ဆိုင်၊ ကလပ် သို့မဟုတ် ပါတီပွဲများသို့သွားလျှင် တစ်ဦးတည်းမသွားပါနှင့်။ သူငယ်ချင်းများ စုပေါင်း သွားခြင်း၊ဖြင့် တစ်ဦးကို တစ်ဦးအပြန်အလှန် ကူညီနိုင်ပါသည်။• သင့်စိတ်တွင် ပုံမှန်မဟုတ်ဟု ခံစားရသော အဖြစ်အပျက်များနှင့် ခပ်ဝေးဝေးတွင်သာနေပါ။• သင် အပြည့်အဝ ယုံကြည်နိုင်ခြင်း၊မရှိသူထံမှ မည်သည့်တိုက်ကျွေးမှုကိုမျှလက်မခံပါနှင့်။• သင်သောက်နေသော ခွက်အား စိတ်ချရသော စောင့်ကြည့်ပေးမည့်သူမရှိဘဲအိမ်သာသွားလျှင်ပင် ချန်မထားခဲ့ပါနှင့်။• အထက်ပါ ဆေးများအား အရက်အပြင် အချိုရည်များ၊ လက်ဘက်ရည်၊ ကော်ဖီနှင့်ချောကလက်ဖျော်ရည်အပူ စသည်တို့တွင် ထည့်ခတ်နိုင်ပါသည်။ သင့်အား ခုခံနိုင်စွမ်း မရှိအောင် ပြုလုပ်နိုင်သည့် ဆေးဝါးများစွာရှိပြီး• အများစုသည် သောက်သုံးသည့် အရည်များအတွင်း အလွယ်တကူ မသိရှိနိုင်ပါ။• ပုလင်းအတွင်းမှ အရည်ကို သောက်သုံးပြီး ပုလင်းအဝအား သင့်လက်မဖြင့်ပိတ်ထားခြင်း၊သည် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုပုလင်းအားစောင့်ကြည့်ပေးမည့်သူမရှိဘဲ ထားခဲ့လျှင် ယင်းပုလင်းအတွင်း မည်သူကမည်သည့်အရာများ ထည့်လိုက်သည်ဟု သိရှိနိုင်စွမ်း မရှိတော့ပေ။• အကယ်၍ ထိုသို့ထားခဲ့မိ၍ ပြန်လာသည့်အခါ သင်၏ ပုလင်း သို့မဟုတ် ခွက်သည်နေရာ ရွေ့နေခြင်း၊၊ ပုံစံပြောင်းနေခြင်း၊၊ ပြည့်အောင် ထပ်ဖြည့်ထားသည်ဟုထင်ရခြင်း၊ သို့မဟုတ် အရသာ ထူးခြားနေခြင်း၊တို့ တွေ့ရှိရပါကဆက်လက်သောက်သုံးခြင်း၊ မပြုပါနှင့်။• အရက်ဆိုင်၊ ကလပ် သို့မဟုတ် ပါတီပွဲတွင် ယခုမှ တွေ့ဖူးသူနှင့်အတူပြန်ရမည်ဆိုပါက အထူးစဉ်းစားပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ပါ။• တစ်ခွက်၊ နှစ်ခွက်မျှနှင့် မူးလာသည်ဟု ခံစားလာရပါက ယုံကြည်ရသော မိတ်ဆွေ၊ကလပ်မှ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း သို့မဟုတ် အရက်ဆိုင် အုပ်ချုပ်သူများထံမှအကူအညီ ရယူပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရသည့်နေရာသို့ ဖြစ်နိုင်သမျှ မြန်မြန် ရောက်ရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။• သင်အကူအညီတောင်းမည့်သူသည် မည်မျှကြာအောင်ပင် သိရှိနေခဲ့သူ ဖြစ်စေကာမူလုံးဝယုံကြည်ရသူ ဟုတ် မဟုတ် သေချာစွာ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပါ။• ကျားမ မရွေး ဆေးခတ်ခံရနိုင်ပါသည်အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်များမှာ ဆေးဝါး အသုံးပြု၍ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခြင်း၊အန္တရာယ်အား လျှော့ချရန် နည်းလမ်းများ ဖြစ်ပါသည်။ သင်အပြင်သွားသည့်အခါတိုင်း အထက်ပါ အချက်အလက်များအား မှတ်မိနိုင်လိမ့်မည်ဟု မမျှော်လင့်ပါနှင့်။ ထို့ကြောင့် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို အထူးဂရုပြုသင့်ပါကြောင်း။(အခုတော့ အဲဒီ Date Rape Drugs တွေ ဖျော်ရည်ထဲမှာ ခတ်ထား မထားစမ်းသပ်သိရှိနိုင်တဲ့ Detection Kit တွေ ပေါ်နေပါပြီ။ အသေးစိတ်ကို*www.collegesafe.com* မှာ သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။) http://www.thithtoolwin.com/2011/12/blog-post_209.html မှ ကူးယူပါသည်။
• ၁၂-၁-၂ဝ၁၃ နယူးဒေလီမှာ အရည်အသွေးမြင့်မားသော (ကက်တမင်း) ၁၆ ကီလိုဂရမ်၊ ကာလတန်ဘိုး ရူးပီး ၁့၆ ကုဋေဘိုးကို ဖမ်းဆီးရမိ။ • ၂၂-၇-၂ဝ၁၂ နယူးဒေလီမှာ အခွန်တော် ထောက်လှမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ကွာလာလမ်ပူကိုပို့မည့် ရူးပီ ၃၅ ကုဋေ တန်ဘိုးရှိသော (ကက်တမင်း) ၃၅၂ ကီလိုဂရမ်ကို ဖမ်းဆီးရမိ။
• ၄-၇-၂ဝ၁၂ ဘုံဘေမှာ ကာလတန်ဘိုး ရူးပီး ကုဋေ ၂ဝ ဘိုးရှိ (ကက်တမင်း) ၂ဝ၅ ကီလိုဂရမ်ကို ဖမ်းဆီးရမိ။ • Ketamine (ကက်တမင်း) ကို Date Rape Drug လို့ခေါ်တယ်။ ရက်ချိန်းနဲ့ မုဒိန်းကျင့်လို့ရတဲ့ဆေးလို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ ပါတီတွေမှာ သောက်စား ပျော်ပါးကြတဲ့အခါ သောက်မဲ့ အရက်၊ ဘီယာ၊ ဖျော်ရည်ထဲကို ဒီဆေးမှုံ့ကို ထည့်ပေးလိုက်ရင် လုပ်ချင်ရာ လုပ်လို့ရာမို့ ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ • (ကက်တမင်း) ကို Rave Party Drug လို့လဲခေါ်တယ်။ အီလက်ထရောနစ်ဂီတနဲ့ ဖျော်ဖြေတဲ့ပွဲမှာ သောက်ကြ စားကြတဲ့ပါတီမျိုးမှာ အလိုမတူတာကျင့်ဘို့ရာသုံးတာကို ဆိုလိုတယ်။ • တချို့မိန်းကလေးတွေက ဒီလိုဖြစ်တတ်ပျက်တတ်တာကို မသိလို့ မုဒိန်းကျင့်တာခံကြရတာရှိသလို တချို့ကလဲ သိသိကြီးနဲ့ သွားတာလဲရှိတာဘဲ။ မိဘတွေ၊ ဆွေမျိုးတွေ၊ သူငယ်ချင်းကောင်းတွေ သိကြစေချင်ပါတယ်။
Rape drugs အဓမ္မကျင့်ဘို့ သုံးကြတဲ့ ဆေးတွေ http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/03/rape-drugs.html ကိုလဲ ဖတ်ပါ။
Size does matter ယောက်ျား-အင်္ဂါ အတိုင်းအတာ
Gender Differences အတွဲများ၏ အစီရင်ခံစာ
Breast Enlargement ကလေးအတွက်မို့ မသေးချင်တာ ရင်သား...
Pregnancy - How she gets pregnant ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြ...
Penile Lesions (1) ကျားအင်္ဂါ အနာများ (၁)
Male orgasm (1) ယောက်ျား ပြီးခြင်း (၁)
Urethritis in Men ယောက်ျားတွေ ဆီးအောင့်ရင်
Pregnancy Prenatal Tests ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် စမ်းသပ်ရ...
Women smell အမျိုးသမီး အနံ့မကောင်းခြင်း
Anal Practice Q and A စအိုကိုအသုံးပြုခြင်း အမေး-အေ...
Q and A Over 18 Readings (33)
Pregnancy prevention by Tubal ligation အမျိုးသမီး ...
STDs (4) လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါများ ဆေးညွှန်း
Nipples light up ရင်သားထိပ်ဖျားသည်
Infertility and TB (2) တီဘီ ဆေးနဲ့ ကလေးမရနိုင်သေြး...
Q and A Over 18 Readings (32)
Vaginal Cysts, Polyps, Warts ဗဂျိုင်းနားမှာ အပိုအဆ...
Q and A Over 18 Readings (31)
Sex helps elderly women (ဆက်က်စ်) ဟာ အမျိုးသမီးကြီ...
Pregnancy Third trimester ကိုယ်ဝန်ဆောင် နောက်ဆုံး ...
Semen colleaction Method သုက်ရည် ထုတ်ယူနည်း
Contraception and Non-medical view ကိုယ်ဝန် တားနည်...
Menstrogen and Flibanserin အမျိုးသမီးဆေးများ
Q and A Over 18 Readings (30)
Rape drugs အဓမ္မကျင့်ဘို့ သုံးကြတဲ့ ဆေးတွေ
Birth Control Risk ကိုယ်ဝန်တားဆေး နဲ့ သွေးခဲခြင်း
Vimax ကျားလိင်အင်္ဂါ ဆေးများ
Q and A Over 18 Readings (29)
Question by Husband and Wife (1) လင်မယား ဆက်ဆံရေး ...
Contraceptive Microgestin FE ကိုယ်ဝန်တားဆေး
Q and A Over 18 Readings (28)
Contraceptive Pills and Pregnancy Q and A (3) တားေ...
Q and A Over 18 Readings (27)
Q and A Over 18 Readings (26)
Erectile Dysfunction (3) ပန်းသေ-ပန်းညှိုး (၃)
Sex education လိင်ပညာ ကျောင်းတွေမှာ ဘယ်လိုပေးမလဲ
Q and A Over 18 Readings (25)
Female Orgasm (2) အမျိုးသမီး ပြီးတာကို ပိုနားလည်လာ...
Q and A Over 18 Readings (24)
Q and A Over 18 Readings (23)
Pregnancy - When does it start? ကိုယ်ဝန်ရှိတယ်ဆိုတ...
HIV and Oral Sex ပါးစပ်သုံးပြီး လိင်ဆက်ဆံတာနဲ့ (အိ...
Q and A Over 18 Reaginds (22)
Q and A Over 18 Readings (21)
Female Masturbation (1) အမျိုးသမီးများ ဖါသာ-အာသြာေ...
Labia မ-အင်္ဂါ နှုတ်ခမ်းသား လှဘို့လိုသလား
Q and A Over 18 Readings (20)
Q and A Over 18 Readings (19)
Q and A Over 18 Readings (18)
Q and A Over 18 Readings (17)
Questions byabachelor ဘယ်နှစ်ကြိမ် ဖြေမလဲ-နေသလဲ
Questions byaspinster အပျိုကြီး၏ မေးခွန်းများ (၁...
Date Rape Drugs သတိလစ်စေရန် ပြုလုပ်နိုင်သည့်ဆေးဝါး...
Health Survey for England သူများဆီမှာ ဒါတွေဖြစ်နြေ...
Q and A Over 18 Readings (16)
Q and A Over 18 Readings (15)
Medical abortion (2) ကိုယ်ဝန်ကို ဆေးသုံး ဖျက်ခြင်း...
Q and Over 18 Readings (14)
Q and A Over 18 Readings (13)
Contraceptive Injection Noristerat ကိုယ်ဝန်တား ထို...
Pearly Penile Papules (PPP) ကျား-အင်္ဂါမှာ ပုလဲကုံးေ...
Contraceptive Pills and Pregnancy Q and A (2) တားေ...
Abortion Q and A (1) မလိုချင်တဲ့ ကိုယ်ဝန် အမေး-အြေ...
Abortion Q and A (2) မလိုချင်တဲ့ ကိုယ်ဝန် အမေး-အြေ...
Q and A Over 18 Readings (12)
Q and A Over 18 Readings (11)
Q and A Over 18 Readings (10)
Q and A Over 18 Readings (9)
Q and A Over 18 Readings (8)
Penile Lesions (2) ကျားအင်္ဂါ အနာများ (၂)
Q and A Over 18 Readings (7)
Sperm Viability and Motility သုက်ပိုးအရည်အသွေး
Female Masturbation (2) အမျိုးသမီးများ အာသာဖြေခြင်...
Q and A Over 18 Readings (6)
Q and A Over 18 Readings (5)
HPV and Marriage သားအိမ်-ကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး
Erectile Dysfunction Medicines (1) ကျား-လိင်အင်္ဂါ သ...
Menstruation Period Signals ရာသီ မမှန်ရင် သတိထားစရ...
Q and A Over 18 Reagings (4)
Low Testosterone and Sex Drive (တက်စတိုစတီရုံး) န...
HPV vaccine ယောက်ျားတွေ အထူးသဖြင့် (ဂေး) တွေအတွက် ...
Infertility Treatments (1) ကလေးရအောင် ကုသနည်းများ ...
Birth Control Pill Types ကိုယ်ဝန်တားစားဆေး ဘယ်ဟာရေ...
Semen Leakage (1) သုက်ရည်ထွက်ကျခြင်း (၁)
Q and A Over 18 Readings (3)
Pregnancy - Looking and Feeling Your Best ကိုယ်ဝန်...
Penis Life Cycle ယောက်ျား-အင်္ဂါ အသက်ကြောင့် ဘယ်လိုေ...
STDs (5) လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါများ အခြေခံ
Q and A Over 18 Readings (2)
Pelvic Pain အမျိုးသမီး ဆီးစပ်နာခြင်း
Semen ပုံမှန် သုက်ရည်
Q and A Over 18 Readings (1)
Pregnancy and Sex (2) ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အရင်လိုနေလိ...